Beledweyn oo uu saaka ka qarxay dagaal xoogani & magaalada oo u gacan gashay Xisbul Islaam. – Radio Daljir
Beledweyn oo uu saaka ka qarxay dagaal xoogani & magaalada oo u gacan gashay Xisbul Islaam.
Janaayo 22, 2010 12:00 b 0
Beledweyn, Jan 22 – Dagaal xooggaan ayaa saaka waabarigii ka qarxay magaalada Beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan, kaasi oo u dhaxeeyey ciidamada Alhu-sunna iyo kuwa ururka Xisbul-Islaam.
Dagaalka oo markii hore ka bilawday duleedka Koonfureed ee magaalada Beledweyn gaar ahaan meel qiyaastii 10KM u jirta magaalad, ayaa markii danbe ku soo siqay gudaha magaalada, halkaasi oo uu in muddo ah is rasaasayntu ay ka socotay.
Dagaalka oo lagu tilmaamay in uu ahaa midkii ugu xoogganaa ee muddooyinkaan danbe ka dhaca magaalada, ayaa ciidamada Xisbul-Islaam waxaa u suurto gashay in ay magaalada la wareegaan, halka ciidamadii Ahlu-sunna Waljameecana ay magaalada ka baxeen iyagoo u baxay dhinaca bari ee magaalada Beledweyn sida ay dad goobjoogayaal ahi noo xaqiijiyeen.
Mas’uuliyiin ka tirsan culimada Alhu-sunna oo ay xiriir la samaysay idaacadda Daljir ayaa beeniyey in magaalada lagala wareegay, waxayna sheegeen in wali la kala joogo meelihii maalmihii dhaweyd la kala joogay.
Ma cadda illaa iyo haatan khasaaraha uu dagaalkaasi gaystay, hase ahaatee wariyaha Daljir ee gobolka Hiiraan ayaa soo sheegaya in ay jiraan khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay dagaalkii maanta.
Magaalada Beledweyn todobaadkii la soo dhaafay waxaa ka dhacay dhawr dagaal oo isku xigxigay kuwaasi oo u dhaxeeyey ciidamada Ahlu-sunna Wajameeca, kuwaasi oo galaaftay nolosha dad badan, dhaawac badanna gaystay halka dad kale oo aad u tiro badanna ay magaalada iskaga carareen.
Beledweyn, waxay muddooyinkaan danbe ahayd meel dagaal oo ay ku hardamaan kooxo iska soo horjeeda, kuna loolamaya gacan ku haynta magaalada, waxaana maalmahaan danbe labada dhinac ee magaalada kala joogay xoogagga maanta ku dagaallamay kuwaasi oo hanjamaado iyo hadallo kulkulul saxaafadda isku marinayey.
Wixiin warar ah ee ka soo kordha magaalada Beledweyn halkaan ayaad ka heli doontaan akhristayaal.